We.com.mm - သံပရာရည် သောက်ရင် ဘာတွေထူးခြားမလဲ ?
သံပရာရည် သောက်ရင် ဘာတွေထူးခြားမလဲ ?
သံပရာသီးဟာ အရမ်းကို လူတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးချိန်တိုင်း သံပရာရည်ကို သောက်မယ်ဆိုရင် သွေးအတွင်း သကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ သံပရာရည် ထမင်းစားဇွန်း (၄)ဇွန်း ပမာဏာက သင့်အတွက် တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် C ကို တစ်ဝက်နီးပါး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး သံပရာရည်က စိတ်ကြည်တယ် လူလန်းပါတယ်။
ဗီတာမင် C လို အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဟာ သွေးလွှတ်ကြောနံရံတွေမှာ ကပ်ငြိတတ်တဲ့ ကိုလ်လက်စထရော ပမာဏကို လျော့ကျစေပါတယ်။ သံပရာသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ သဘာဝအတိုင်း ရောဂါ ကာကွယ်ပေးမယ့် လီမိုနင်းဒြပ်ပေါင်းလည်း များစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးတွင်း ကိုလက်စထရော ပမာဏကို လျော့ကျစေပြီး ကင်ဆာရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ပညာရှင်တွေမှ ပြောကြားထားကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သံပရာရည်ကို ရိုးရိုးရေနဲ့ မဖျော်ဘဲ ရေနွေးပူပူလေးထဲ သံပရာသီး ညှစ်ထည့်သောက်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ ထပ်ထူးခြားနိုင်လဲ ထပ်လေ့လာကြည့်ရအောင် ….
(၁) အစာချေဖျက်မှုကို ကူညီပေးခြင်း
နံနက်စောစော အစာမစားမီ သံပရာသီးညှစ်ထည့်ထားတဲ့ ရေနွေး တစ်ခွက်သောက်သုံးခြင်းက အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကို နှိုးဆွပေးပါတယ်။ အစာချေဖျက်မှုအားကောင်းလာပြီး ရင်ပူရင်ဆာဖြစ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးကာ အစာအိမ်ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ကူညီပေးသည်။
သံပရာသီးမှာ အဆိပ်ပြေနိုင်တဲ့ အင်ဇိုင်းများ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုကောင်းလာအောင် ကူညီနိုင်တဲ့ စီးထရစ်အက်စစ်ပါဝင်ပါတယ်။ စီးထရစ်အက်စစ်က အသည်းကိုလည်း နှိုးဆွပေးပြီး အဆိပ်ဖြေရာတွင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) ခန္ဓာကိုယ်ရေဓာတ်ကို ထိန်းပေးခြင်း
သံပရာသီး ညှစ်ထည့်ထားတဲ့ ရေနွေးလေးက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အက်စစ်ဓာတ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ သံပရာရည်မှာ စီးထရစ်အက်စစ်ပါဝင်ပြီး အခြားပါဝင်တဲ့ သတ္တုဓာတ်နဲ့ အာဟာရဓာတ်များမှာ အယ်လ်ကာလီသဘာဝသာရှိပါတယ်။ စီးထရစ်အက်စစ်မှာ မပြင်းသော အက်စစ်ဖြစ်တာမို့ ချွေးထွက်များခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ခန္ဓာကိုယ်မှ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
(၄) ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အားကောင်းစေခြင်း
စီးထရစ်အက်စစ်ပါဝင်သော အစားအစာများ အားလုံးတွင် ဗီတာမင် C ပါဝင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် C မှာ အအေးမိခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သံပရာသီးတွင် ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်သောကြောင့် ဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွပေးနိုင်ပြီး အာရုံကြောလုပ်ဆောင်မှုကို အားကောင်းစေကာ သွေးကိုထိန်း ချုပ်ပေးနိုင်သည်။
ဗီတာမင် C က အရေပြားထဲရှိ ပရိုတင်းဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုကို ကူညီပေးသောကြောင့် နုပျိုသော အသားအရေအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများက ညိုညစ်ညစ် အသားအရေကို တစ်ခါပြန်တောက်ပလာစေပြီး ကျန်းမာလာစေပါတယ်။
သံပရာသီးညှစ်ထည့်ထားသည့် ရေနွေးက သွေးကြောများထဲရှိ အဆိပ်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အပြင် အမည်းစက်များပေါ် လိမ်းပေးပါကလည်း အရောင်ဖျော့သွားစေနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်မှာ စားပေးသင့်တဲ့ အစားစာ (၃) မျိုး…
သင်မသိသေးတဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာ ရေသူမလေးတွေရဲ့အကြောင်း